Xildhibaanada Faderaalka oo Warsaxaafadeed kasoo saaray xiisadda Sool (dhegayso) – Radio Daljir
Xildhibaanada Faderaalka oo Warsaxaafadeed kasoo saaray xiisadda Sool (dhegayso)
Juunyo 4, 2018 8:17 g 0
Warsaxaafadeed kasoo baxay xildhibaano iyo wasiiro katirsan Dowladda Faderaalka Soomaaliya, kana soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag ayaa markii u horaysay cadeeyey mowqifkooda xiisadda gobolka Sool, iyagoona taageeray howlgalka dowladda Puntland ay kusoo celinayso gobolka Sool.
Waxaa ay sheegeen inay muqadas tahay midnimada umadda Soomaaliyeed.
Raadio Daljir ayaa fahamsan golaha xukuumada iyo xildhibaanada ee matala gobolada waqooyi gaar ahaan Hargaysa inay had iyo jeer ay kala shaqeeyaan Somaliland siyaasadda arimaha dibadda iyo mashaariicda caalamiga.
Hoos kadhegayso warsaxaafadeed.
Guddiga Difaaca Puntland oo ka hadlay la dagaalanka Al-shabaab iyo Somaliland (dhegayso)